Ikhaya » Izindaba Zamuva » zezindiza » Kuyethusa? Indiza ye-Air India A320 esuka eDelhi iya eKabul
Izindaba ze-Afghanistan Breaking • Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba ze-India Breaking • Izindaba • Abantu • Inkulumo Yezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
I-Air India A320 isuka eKabul iya eDelhi
I-Air India Flight 243 ngeSonto, ebisebenza nge-Airbus 320, ibisendizeni ebihleliwe isuka eDelhi, eNdiya, iya enhlokodolobha yase-Afghanistan iKabul. Ngenkathi lendiza yelungu leStar Alliance isendleleni futhi isondela, uKabul weqiwa ngamasosha eTaliban.
“Isikhala sasemoyeni phezu kwe-Afghanistan kuthiwa sivaliwe, ngakho-ke ayikho indiza engasebenza lapho. Ukuhamba kwethu ngendiza okuya eKabul nakho akukwazi ukuhamba, ”kusho okhulumela i-Air India.
Izolo, ukuhamba kwe-Air India Flight 243 ukusuka eDelhi kuya eKabul ngo-8: 50 ekuseni isikhathi sase-India kubambezeleke kancane ngesikhathi sihamba nabagibeli abangama-40 base-Afghan nge-Airbus A320.
Kuyindiza yamahora ama-2, imizuzu emihlanu ukuya e-Afghanistan engomakhelwane. Ngemuva kokuwela umngcele ku-AI 5 ngo-Agasti 243 futhi indlela kulindeleke ukuthi iqale, indiza ye-Air India yayalelwa ukuthi ibambe futhi izungeze ngamamitha ayi-15 ukuphakama eminye imizuzu engama-16,000 ngaphambi kokuba ivunyelwe ukufika.
Ukufika kwesinye isikhathi kungabambezeleka ngenxa yokungaxhumani kahle komoya e-Afghanistan airspace.
Ngenkathi amaNdiya egubha uSuku Lokuzimela ngeSonto, ngo-Agasti 15, amaTaliban ayenjalo ukudala isiphithiphithi nokwethuka ekuthatheni iKabul, inhlokodolobha yase-Afghanistan.
Abantu baseKabul basale bethukile njengoba kuvele izindaba zokuthi amaTaliban azungeze idolobha ngalolo suku. Uhulumeni wase-Afghanistan wayebaleka ezweni, futhi nomuzi uqobo wawunezinxushunxushu.
I-Air India 243, a I-Star Alliance indiza eqhutshwa yi-Air India, ibithwele abasebenzi abangu-6 nabagibeli abangama-40 besuka eDelhi baya eKabul bengazi noma bazovunyelwa yini ukuhlala noma sebefikile esikhumulweni sezindiza saseKabul. Ibhanoyi liyalelwe ukuthi lizungeze isibhakabhaka ngaphandle kwesizathu.
Emizuzwini engu-90 elandelayo, i-Air India yazungeza isibhakabhaka endaweni ephakeme ngamamitha ayi-16,000. Indiza ye-Air India ihambile nophethiloli we-jet owengeziwe. Umshayeli wendiza onolwazi wayazi ukuthi kungahle kube nokubambezeleka kokwehla ngenxa yokuxhumana okungekuhle kwezindiza esikhumulweni sezindiza saseKabul kwesinye isikhathi.
Njengendiza yaseNdiya, ezinye izindiza ezi-2 zakwamanye amazwe bezindiza ngaphandle kwemvume yokuhlala. Ngaphezu kokuthi amaTaliban athathe idolobha, ukusebenzisa indiza ngaphezu kweKabul kuyinselelo ethile.
Isikhumulo sezindiza iKabul kaningi "simatasa futhi siyadinisa" abashayeli bezindiza bathi. Ngalesi sikhathi sonyaka, ukundizela edolobheni kuletha inselelo eyengeziwe: imimoya inamandla futhi inamandla.
Izindiza ezihlala abantu abangu-160 zahlolwa nguCaptain Aditya Chopra.
Imvume ekugcineni yanikezwa ngo-3: 30 ntambama isikhathi sendawo sokuba indiza yehle.
Abagibeli nabasebenzi babengazi nokho ukuthi isimo sezombusazwe eKabul sasiba sibi. Ngisho nangemva kokufika kwendiza, akekho noyedwa osebenza naye oshiye i-cockpit, evame kakhulu eKabul. Ngemuva kokulinda cishe ihora nengxenye, indiza ye-Air India yagibela abagibeli abangu-129 yaphinde yabuyela eDelhi.
Le ndiza ibithwele abasebenzi bamanxusa aseNdiya, izikhulu zikahulumeni wase-Afghanistan, okungenani amalungu amabili ePhalamende lase-Afghanistan, kanye nomeluleki omkhulu walowo owabe enguMengameli u-Ashraf Ghani.
Umgibeli uthe ubona abantu esikhumulweni sezindiza iKabul bedangele bezama ukuhamba.
NgoMsombuluko, i-Air India ibindiza ehlelelwe iKabul isuka eDelhi ngo-8: 50 ekuseni. Kuqale kwabambezeleka kwaba ngu-12: 50 ntambama futhi ngemuva kwalokho kwamiswa ngemuva kokuvalwa kwendawo yomoya e-Afghanistan ngemuva kokukhishwa kwe-NOTAM - Isaziso ku-Airmen, isaziso esisemthethweni esiqukethe imininingwane yokusebenza kwezindiza.
Abanye abagibeli ebebesendizeni bakhulume ukuthi “bayakuzwa ukushuba kwesimo phansi,” kodwa bekungacaci ukuthi kwakumayelana nani.
Kwakunamasosha agwinciza imigwaqo yezindiza. Kwakukhona nokuduma kwemisebenzi yomoya: Izindiza zezindiza ze-C-17 Globemaster ezokuthutha ezempi kanye nezindiza ezinophephela emhlane zeChinook zazindiza zingena ziphuma.
Futhi babone izindiza zomphakathi zasePakistan (PIA) kanye neQatar Airways zimiswe kuphahla.
Lesi, mhlawumbe, esinye sezithombe ezidabukisa kunazo zonke engizibonile #Afghanistan. Abantu abaphelelwe yithemba futhi abalahliwe. Azikho izinhlangano zosizo, ayikho i-UN, nohulumeni. Lutho. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR
- UNicola Careem (@NicolaCareem) August 16, 2021
I-WTTC: Ukuhamba ngebhizinisi kuzofinyelela izingxenye ezimbili kwezintathu zangaphambi ...
Ukuziphatha okungamukeleki: IFrance ikhumbula izithunywa zayo e-US ...
Ungqongqoshe: Wonke umuntu waseJalimane uzogonywa, welashwe noma...
Isimemezelo Esisha Se-Glasgow Ngesenzo Sesimo Sezulu Kwezokuvakasha...